कसले सुनिदिए दम्पतीका प्रार्थना? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिन कसले सुनिदिए दम्पतीका प्रार्थना?
कसले सुनिदिए दम्पतीका प्रार्थना?
September 7, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
मणिकुमार प्रधान, सालबारी
दम्पती चिन्तित थिए – ती दुईजनामा को पहिले यो संसारलाई छाडी जाने?
‘तपाईं पहिला जानोस्। म पहिला हिंडे भने त तपाईंलाई कसले याद गर्छ र? तपाईंको चिसो तातो, दबाई-पानी, समयमै खानु पिउनु, लुगा-फाटा धुइदिनु… यी सब कुराहरू कसले पो सोंचिदेला र?’ यो पत्नीको चिन्ता।
‘मेरी प्रिये, लेडिज् फर्स्ट! तिमी पहिला जानुपर्छ नि हौ! मबिनाका तिम्रा दिनहरू कति असह्य, कष्टकर होलान्! कति यातनाहरू सहनुपर्ने हुन्छ होला मबिनाका तिम्रा क्षणहरू । म कल्पना समेत गर्न सक्तिनँ।’ पतिको सम्झाइ-बुझाइ गर्ने प्रयास।
को पहिला जाने विषयमा निकै बहस चलेपछि दम्पती राजी भए एउटा कुरामा: दुवै एकार्काका साथ लिएरै यो नश्वर शरीरलाई त्याग्ने। मर्नु परे एकसाथ मरौंला। एकार्काको दु:ख कष्ट त देख्नु पर्दैन। पत्नीको यो कुरामा ऐेले पतिको अनुहार पनि उज्यालिएको। दुवैका स्वास-प्रस्वासमा सञ्चको आभास ऐले।
यसपछि दम्पतीका प्रार्थना हुन्थे सधै यसरी, हे सर्वशक्तिमान्, हे करूणामय, हे दयाको सागर, हामी दुवैलाई तपाईंले कुनै दिन पनि तपाईकहाँ बोलाउनुभयो भने छुट्टै नबोलाउनुहोला। हामी दुवैलाई एकै साथ तपाईंको सरणमा लिनुहोला।
त्यो दिन दम्पतीका शहरमा आन्दोलनको आगो दन्केको थियो। आफ्नै भूमि र अस्मिताका निम्ति लडिरहेकाहरूलाई राज्यको प्रसाशनले अत्याचार र तानाशाहीको हतियारले दबाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको थियो। शहर आतङ्कित थियो। कोलाहलमय थियो। आन्दोलनकारीहरूलाई छातीमा लागेका बन्दुकका गोलीहरूले हतोत्साहित बनाइसकेका थिए। यस्तै भयावह स्थितिमा पनि दम्पतीका प्रार्थनामा विराम लागेको थिएन। आजको रात पनि त्यस्तै थियो। दम्पती प्रार्थनामा डुबिरहेका थिए। हे सर्वशक्तिमान्… हामी दुवैलाई एकैसाथ तपाईंको सरणमा लिनुहोला… दुवैले प्रार्थना के सिद्धयाएका थिए ड्याङ्… ड्याङ्… ड्याङ्… प्रार्थना गरिरहेका कोठाभित्र बाहिरतिरबाट आएका बन्दुकका गोलीहरूले दम्पती धराशायी भए।
दम्पतीका प्रार्थना त साँच्चै सुनियो तर कसले
सुनिदिए दम्पतीका प्रार्थना? सर्वशक्तिमान्-ले?
करूणामयीले? दयाको सागरले? अथवा
सर्वशक्तिमान्-द्वारा सृजित अर्का शक्तिमान्-ले?
सिलगढीको होटलमा अभिनेत्री मृत्त फेला : होटललाई सिक्किम र पिता राँची जाने भनेर ढाँटेकी थिइन
कलकत्तापछि आज सिलगढीछेउ भाँच्चियो पुल: सरकारले पैसा नदिएकोले पुल ढलेको हो-माकपा